I-Kloof High ilekelele abe-Pink Drive | News24
I-Kloof High ilekelele abe-Pink Drive
IZITHOMBE: ZITHUNYELWE U-Sibu noNkk Annatoria Mbhele
ABAFUNDI besikole i-Kloof High abangaphezulu kwama-100, abazali nothisha balule isandla kumkhankaso owaziwa ngokuthi yi-Pink Drive lapho bebe volontiya khona ukulekelela emjahweni wabasubathi, ngeledlule.
Lama volontiya abelekelela ngokunikeza abasubathi iziphuzo ngesikhathi bedlula endaweni yase-Polly Shortts.
Bonke laba abebe lekelela kwi-Pink Drive, banconywe ngomsebenzi wabo omuhle, njengoba besebenze ngokubambisana nangokuzi khandla.
Okhulumela isikole sase-Kloof High, uNkk Janet Brodey uthe abasubathi bagculiseka ngendlela okwakusetshenzwa ngayo. Uthe: “Bancoma indlela esazikhandla ngayo, nokuthi indawo esasisebenzela kuyo yayi hlanzekile futhi iqoqekile. Siyaziqhenya ngabafundi bethu nemisebenzi yabo emihle abayenza zinsuku zonke. Okuhle wukuthi abe-Pink Drive bacele ukuthi sibalekelele futhi ngonyaka ozayo,” kusho yena